Mogadishu Journal » European Super League: Perez ayaa ku andacooday in kooxaha ‘aysan bixi karin’
Florentino Perez ayaa sheegay in kooxihii sheegtay todobaadkan inay ka tageen European Super League ay weli qandaraas ku xiran yihiin mashruucan.
Madaxweynaha Real Madrid, oo ahaa nin dhaqaajiya isla markaana si adag u ilaaliya kala tagga muranka dhaliyay, ayaa sheegay in kuwa saxiixay "aysan bixi karin", xitaa haddii ay dhahaan waxaan ka baxay horyaalka.
Laba iyo toban koox ayaa Axaddii la soo dhaafay caddeeyay inay ka go'antahay Super League, laakiin Talaadadii dhammaan lixda naadi ee Premier League waxay ku dhawaaqeen inay ka baxeen. Inter iyo Atletico Madrid ayaa si dhaqso ah u raacay, Milan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka baxdo, halka Juventus ay weli u ololeyneyso horyaalka laakiin waxay qireen inuu burburay.
Real Madrid iyo Barcelona aad ayey u sii jiraan, laakiin dhammaan mudnaanta kulanka El Clasico, waxay u baahan yihiin kooxo kale oo dadaal adag sameeya.
Perez ayaa la weydiiyay wareysi uu siiyay wargeyska Isbaanishka AS haddii ay run tahay in kooxaha ay tahay inay iska iibsadaan qandaraasyada.
Waxa uu yiri: “Ma qaadan doono waqtigeyga si aan u sharaxo waxa ku jira qandaraaska halkan, laakiin xaqiiqda ayaa ah, in kooxaha aysan bixi karin.
Qaarkood, cadaadiska dartiis, waa inay dhahaan waan ka tagayaa. Laakiin mashruucan, ama wax aad isugu eg, way dhici doonaan, waxaana rajeynayaa inay tahay mustaqbalka dhow.
Taageerayaasha, ciyaartooyda, tababarayaasha, siyaasiyiinta iyo xitaa boqortooyada ayaa ka soo horjeestay qorshayaasha, oo leh dabeecadda 'dukaanka xiran' ee Super League, taas oo 12-ka naadi ee aasaasayaasha ah loo damaanad qaadayo ka sii mid ahaanshaha, laguna dhaleeceeyay inay yihiin kuwo ka soo horjeeda tartanka fikradda.
UEFA iyo FIFA, oo ah hay’ado muddo dheer xukumayey ciyaaraha yurub iyo aduunkaba, ayaa sii kala firdhiyey waxayna tilmaameen suurtagalnimada in ciqaab la saaro kooxaha ku lugta leh.
Perez wuxuu wacad ku maray in Super League aan wali la dilin oo kaliya uu yahay mashruuc hurdo, oo diyaar u ah in dib loo soo nooleeyo.
"Hay'addu way jirtaa oo xubnaha ka sameeya Super League sidoo kale way joogaan," ayuu yiri.
Waxa aan qabanay waxaa naloo siiyay isbuucyo dhowr ah si aan uga fikirno cadaawada ay dad gaar ah oo aan rabin in ay lumiyaan mudnaantooda ay u maleegeen mashruuca.
Wuxuu sheegay in dadka dhaqaalaha ka taageera JP Morgan ay wali ku lug leeyihiin arintaas, in kasta oo shirkada bangiyada maalgashiga ay ku tilmaamtay "si cad loo qalday" dareenka qotoda dheer ee kicin doona bulshada kubada cagta ee horyaalku.
“Waqti ayey qaateen si ay uga fekeraan, sida 12-ka naadi,” ayuu yiri Perez. Haddii wax loo baahan yahay in la beddelo, waa la beddeli doonaa, laakiin Super League waa mashruuca ugu fiican ee aan u malaynay in la fulin karo.
Perez ayaa sheegay inuu ku wareersan yahay qorshayaasha balaarinta UEFA ee Champions League, oo lagu dhawaaqay Isniinta, taas oo arki doonta 36 koox halkii 32 ee haatan ay ka tartami doonaan xilli ciyaareedka 2024-25, mid kasta oo ka mid ah wuxuu damaanad qaadayaa ugu yaraan 10 kulan xilli ciyaareedkiiba, wuxuuna sheegay in taariikhda bilaabashadu ay ahayd aad u fog.